Maraakiibta iibka ee BURULAŞ | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaMAGACYADA LAGU SAMEEYO BURULAS
16 / 01 / 2018 16 Bursa, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, RAYMARKET, for sale, TURKEY, taraamka
BURULAŞ, oo ah shirkadda gaadiidka ee degmada Boosaaso, ayaa sidoo kale ku xukuntay baabuur xadidan oo aan wali lahayn ka dib markii diyaaradaha dhaadheer.
BURULAS, xilligii maamulkii hore ee Nederland ee dib u habeeynta khadadka muddada dheer ee Bursaray ayaa isticmaalay.
Gawaarida, kuwaas oo nidaamka galay dhibaatooyin badan oo soo noqnoqonaya, ayaa laga soo jiiday khadka horaantii markii gaariga gudaha ee soo galay wareegga.
24 wagons, oo haatan ka baxsan adeega oo lagu hayo bakhaar ku yaal Xarunta Dhaqdhaqaaqa Hawlaha Bursaray, ayaa lagu iibiyaa xaraashka.
BURULAŞ 31 ayaa macaamiisha ugu yeeri doonta 24 xawaaraha Rotterdam iyadoo la adeegsanayo habka xidhitaanka ee bisha Janaayo.
Magaca mucaaradka mudo gaaban nidaamka tareenada baabuurta, haddii macaamilku ka soo baxo magaalada ayaa qaadi doona rakaab.
Metropolitan Municipality Metro Metropolitan AS waxay diyaar u ahayd wakhti yar, laakiin iibsigaa waa la iska tuuray sababtoo ah dhererka meeraha.
Gaadiidka 1953 iyo 1982 ee 9 ee baabuurta gawaarida ee hore u iibsaday oo lagu hayaa bakhaarada qadka loo yaqaan "Cumhuriyet Street-Incirli" ayaa la siiyaa hindise-bixiyeyaasha isla hindisada.
Isla maalintaas DurmazlarWaxaa la shaaciyey in moodalka 1 6 hal-dariiq ee Silkworm trolley laga soo iibsaday T-2013 la iibin doono. Laakiin waxaan ogaanay in tan si lama filaan ah loogu daro liiska iibinta.
Haddii degmada Metropolitan ay iibiso gawaarida, ilaha mustaqbalka waxaa loo isticmaali doonaa horumarinta farsamada ee Bursaray.
Dhinaca kale, waxaan waydiinay Mehmet Kürşat Çapar, maareeyaha Guud ee BURULAŞ shalay, waa maxay duulimaadka biyuhu ay iibinayaan.
Waxa uu sheegay in uusan u muuqan inuu diyaar u yahay hindisada ugu horeysay iyo in ay sidaa sameeyaan si waafaqsan nidaamka.
Maamulaha Guud ee Capar, laba ka mid ah diyaaradaha kadib markii hindisaha Mersin Metropolitan oo ujeedkiisu yahay, shimbiraha biyaha ayaa la waydiisanayaa in la qiimeeyo inta u dhaxeysa Jamhuuriyadda Turkiga ee Waqooyiga Cyprus.
Sapa ayaa sheegay in aysan si xushmad leh u eegin shimbiraha biyaha ee soo socda ee soo jeedinta ganacsiga wadajirka ah.
Isha: Ihsan Aydın - www.olay.com.t waa
Kordhinta cusub ee BURULAŞ ilaa sanadka cusub
Xogta Saddexaad ee Ardayda Ka Shaqeyneysa BURULAŞ
BURULAŞ Bursaspor waa la sharaxay!
New Generation Wagons oo ka socda TÜDEMSAŞ
Xuquuqda lahaanshaha ee buuxda ee kaadhkan waxaa loo gudbiyaa BURULAŞ
Baska Yellow ee BURULAS waxay yimaadeen Inegol
BURULAŞ ayaa ugu dambeyntii u dhaqaaqay baarlamaanka
Adeegga Amniga ee Gaarka ah ee ka socda BURULAŞ
11 waxaa laga saaray BURULAŞ
BURULAŞ ee Istanbul - Duulimaadyada Caangalaale Seaplane ayaa bilaabmay
30 Milyan Lira Lacagta BURULAŞ
Maraakiibta Canshuuraha ee laga soo qaado Sivas ilaa Caalamka
Muwaadiniinta ayaa riixaya gawaarida Nostalgic ee Daadin
Codso qoondaynta loogu talagalay 19 Jaroyinka iyo Qeybta sare
Gawaarida aan rooneynin waxaa sidoo kale lagu soo bandhigaa sergiler.kurslar.filim çalmakalar.kafe.kokanta.